hataru/हटारु: छापामार पुत्र
शिविर बाहिर बसेका आमा जनसेना आफ्ना बच्चासहित तिहार मनाउन शिविरमा आएका थिए। कति युद्धकालमा र कति शिविरमा बसेपछि जन्मेका बालबालिका कोही स्कुले उमेरका थिए त कोही स्कुल जाने तर्खरका।
उनीहरुका जीवनशैलीमा छापामार बाबाआमाका प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्थ्यो। जस्तो आबामाका सैन्य पोसाक लगाउँदा रमाउँथे। सर्ट र पाइन्ट जिउमा फिट नभए पनि टोपी मात्र लगाएर भए पनि कहिले यता दगुर्थे कहिले उता। 'दुश्मनसितको लडाइँ' भन्दै एकअर्काबीच लखेटालखेट गर्थे।
बाबा जनसेनाको टोपी लगाएका यी छापामारपुत्र हुन् रेशम बुढामगर। उनी पाइलट बन्न चाहन्छन्। रोल्पा इरिबाङ घर भएका पोष्टबहादुर बुढा रणदीप र पाछाबाङकी विमलाका छोरा हुन् रेशम। रणदीप हात्तीखोरस्थित परिवर्तन स्मृति बि्रगेडका सहकमाण्डर हुन् भने विमला झ्ल्टुङडाँडास्थित चौथो डिभिजन मुख्यालयमा कार्यरत। रेशम युद्धकालको अन्ततिर जन्मेका थिए। उनका मिल्ने साथी नवीन शाही दैलेखका हुन्। उनका बाबा हिमाल परिवर्तन स्मृति बि्रगेडमै बटालियन सहकमाण्डर छन्।
Posted by Nabin Bibhas at 8:04 AM
Anonymous November 4, 2009 at 1:40 AM
Jyan le Nepali sahitya ma sabailai math garne novel lekhdai6jasto66apamar sambandhi! La hai 6ito aunuparyo novel.
यी नानीहरुको भबिस्ये कस्तो होला ? राज्यले बेबस्थापन गर्नु प्र्यो नी त
माओवादीले भुल्यो लालसलाम